Kusazoshunqa uthuli emidlalweni ye-Uefa Champions League - Impempe
Kusazoshunqa uthuli emidlalweni ye-Uefa Champions League
Ompetha be-Uefa Champions League banyakenye iBayern Munich bazobhekana neParis Saint-Germain emidlalweni yama-quarterfinal ngemuva kokuqhathwa kwaqembu.
La maqembu iwona adlale kowamanqamu ngonyaka odlule lapho kuwine khona iqembu laseGermany (iBayern). Lo mdlalo kulindeleke ukuthi udle ngokushuba ikakhulukazi ngoba akulula ukuqagela imidlalo yeChampions League kulokhu ngoba azivunyelwe izibukeli ezinkundleni. Ukudlalela ekhaya nasekuhambeni kucishe kube yinto efanayo.
IReal Madrid esiwine lo mqhudelwano kawu-13 izobhekana neLiverpool okuwumdlalo oyimpinda yowamanqamu weChampions League ka-2018. IManchester City yona izobhekana neBorussia Dortmund, kanti iChelsea, evuthayo kulezi zinsuku, izobhekana neFC Porto kwenye i-quarterfinal.
Imidlalo yomlenze wokuqala yama-quarterfinal izodlalwa ngo-Ephreli 6 no-7 bese umlenze wesibili udlalwe ngesonto elilandelayo. Eyandulela owamanqamu izodlalwa ngo-Ephreli 27 no-28 bese umlenze wesibili udlalwe ngoMeyi 5 no-6.
Indlela okuqhathwe ngayo kubukeka sengathi kweyandulela eyamanqamu kuzobe kuyiBayern Munich, Liverpool, Manchester City neChelsea, uma kuya ngefomu yamaqembu njengamanje. Lokho kungasho ithuba elikahle kakhulu lokuthi indebe igcine iphelele e-England. Nokho konke lokho kungase kungenzeki ngoba kuyaziwa ukuthi iChampions League ihlale imangaza abaningi, ngisho amaphanta imbala. Okucacayo nokho ukuthi kusazoshunqa uthuli emidlalweni yeChampions League.
Previous Previous post: Usezoqeqesha kwiCeltic ubhuti kaModise
Next Next post: Ufuna ukwandisa isibalo sabadlali azokhetha kubo owebhola lomnqakiswano